कुन राशिको प्रेम जीवन कस्तो रहला ? - राशि - साप्ताहिक
कुन राशिको प्रेम जीवन कस्तो रहला ?
सन् २०१९ फेब्रुअरी १४ देखि सन् २०२० फेब्रुअरी १३ सम्मका लागि
यो वर्ष मेष राशिका स्वामीहरूको प्रेम जीवन सुखद रहनेछ । तपाईंको दृष्टिकोणले विपरीत लिंगीहरूलाई प्रेम सम्बन्ध अघि बढाउन प्रेरित गर्नेछ । यदि तपाईं प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने विवाह हुने सम्भावना छ । प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्न भने लभ पार्टनर फेला पर्न सक्छन् । विवाहितहरूको हकमा सम्बन्ध केही तनावपूर्ण देखिए पनि अन्त्य सुखद नै होला । लामो समयदेखि छुट्टिएर बसेका श्रीमान्–श्रीमतीबीच पुनर्मिलनको योग छ । विवाहेत्तर सम्बन्ध यो राशिका स्वामीहरूका लागि सदैव हानिकारक रहँदै आएको छ । खासगरी नोकरी गर्ने महिला–पुरुषले कार्यालयमा आफ्ना सहकर्मीहरूसँग गर्ने व्यवहारले शंकाको बीउ रोप्न सक्छ । थोरै सावधानी अपनाउँदा वर्ष तनावरहित बित्नेछ ।
वृष राशिका स्वामीहरूको प्रेम जीवन सकारात्मक एवं उत्साहप्रद देखिन्छ । तपाईंको चञ्चल मनका कारण जीवनसाथी वा प्रेमी–प्रेमिकाले पटक–पटक तपाईंको व्यवहारको गलत अर्थ लगाउन सक्छन्, जसका कारण कतिपय समयमा तनावको समेत सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यो राशिका स्वामीले वर्षभरि नै आफ्नो पार्टनरले आफूबाट के चाहेको छ भन्ने विषयमा सचेत हुनु हितकर हुन्छ । अर्को पक्षबाट बेलाबखत लाग्ने आक्षेपप्रति अपराधबोध गर्नुभन्दा त्यस्ता कुरालाई क्षणिक आवेगका रूपमा लिन सकियो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव जीवनभर रहनेछ । सानोतिनो विवादलाई ठूलो इस्यु नबनाई अघि बढ्दा जीवन तनावरहित हुनेछ ।
प्रेम सम्बन्धका दृष्टिले वर्ष मध्यम रहनेछ । यो वर्ष जीवनसाथीसँग मिलेर भविष्यका लागि प्रेम एवं पारिवारिक सामान्जस्यताको मार्ग पहिल्याउने प्रयास गरिनेछ । सिंगलहरूको हकमा असोज–कात्तिकतिर नयाँ सम्बन्ध विकास हुने देखिन्छ । कसैलाई मनमा राखिएको छ भने त्यस्तो सोच भ्रममा परिणत हुनेछ । यतिवेला देखापर्ने मानसिक उथुलपुथुलले शारीरिक हानि पुर्‍याउन सक्छ । प्रेममा रहेकाहरूको सम्बन्ध टुट्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । वादविवादमा नअल्झिनु नै उपयुक्त हुन्छ । अर्को पक्षको विचारलाई सम्मान गर्न सक्ने व्यक्तिको प्रेमसम्बन्ध मात्र सुरक्षित रहनेछ । मनमा इगो राख्दा त्यसले प्रेम जीवनमा पुर्‍याउन सक्ने हानिका लागि राशिका स्वामी आफैं जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।
प्रेम र रोमान्सका दृष्टिले वर्ष स्मरणीय हुनेछ । आफ्ना प्रेमी वा प्रेमिकालाई राम्रोसँग बुझ्न सफल भइनेछ । आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई अघि बढाउन अर्को पक्षका आफन्तहरूसँग कुरा चलाउन हतार नगर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । वैवाहिक जीवनमा सानातिना विवाद भए पनि त्यस्ता विवादको छायाँ प्रेम सम्बन्धमा देखिने छैन । शारीरिक रूपमा टाढा भए पनि निरन्तर सम्पर्कमा रहने तपाईंको बानीको अर्को पक्षले सदुपयोग गर्नेछन् । सार्वजनिक जीवनमा तपाईंले व्यहोर्नुपर्ने कतिपय तनावलाई सहयात्रीले आफ्नै तनाव सम्भिँmदा ठूलो राहत मिल्नेछ । विपरीत लिंगीको यस्तो व्यवहारले प्रेम जीवनमा अघि बढ्न तथा सक्रिय रहन थप प्रेरणा दिनेछ ।
यो वर्ष तपाईंको चाहनाले नयाँ आकाशमा उड्ने कल्पना गरेको छ । आफ्नो सम्बन्धलाई परिवारमाझ खुलेर देखाउने समय आएको छ । अहिलेको समयमा पनि प्रेम सम्बन्धलाई लुकाउने प्रयत्न गर्नु भनेको भविष्यका लागि खराब संकेत हो । जसले आँट्यो, उही बाँच्यो भन्ने उखान चरितार्थ गर्नुहोस्, तपाईंको प्रेममय सपना यथार्थमा परिणत हुनेछ । विवाहितहरूमा शनि, वृह्स्पति तथा राहुबीच देखिएको खगोलिय तनावले प्रभाव देखाउनेछ । यस्तो बेला सम्बन्धमा कटुता निम्तिन सक्छ, तसर्थ जीवन साथीप्रति विश्वास कायम राख्दै आफ्ना भावनाहरूमा नियन्त्रण गर्नुहोला । केही खड्को भए पनि समग्र सम्बन्ध भने सुरुचिपूर्ण नै रह्ला । चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
यो वर्ष कन्या राशिको प्रेम जीवनमा उतार–चढाव देखा पर्नेछ । विवाहितको हकमा समय केही तनावपूर्ण देखिन्छ भने प्रेमीहरूको हकमा समय केही गरेर देखाउने अवसरका रूपमा आउनेछ । सामान्य मित्रता पनि प्रेममा परिणत हुन सक्ने योग भएकाले सम्भव भएसम्म आफूलाई मन परेको व्यक्तिसँगको मित्रतालाई अघि बढाउनुहोला । जेठदेखि असोजसम्मको समयमा विछोड हुन सक्छ । यो समयमा कामको सिलसिलामा आफ्ना प्रेमी वा प्रेमिकासँग टाढा जानुपर्ने हुन सक्छ । यतिबेला अनावश्यक शंका–उपशंका गर्दा अर्को पक्षले नकारात्मक धारणा बनाउने सम्भावना भएकाले आफ्ना प्रेमी वा प्रेमिका प्रति दृढ विश्वास व्यक्त गर्नुहोला ।
यो वर्षको प्रेम जीवन रोमाञ्चकारी रहनेछ । खासगरी प्रेममा रहेका अविवाहितहरूका लागि वर्ष सानदार सावित हुनेछ । कतिपय अन्तरंग सम्बन्ध गाँसिन सक्छन् । बिछोड भएका प्रेमी वा प्रेमिकासँग पुनर्मिलन हुन सक्छ । कल्पना गरे जस्तो प्रेम प्राप्त गर्न आफ्ना प्रेमी वा प्रेमिकासँग बढीभन्दा बढी समय बिताउनुपर्नेछ । समयमै प्रेम प्रस्ताव राख्न सकिएन भने पछि गएर पछुताउनुपर्ला । असोजको आधाआधीपछि प्रेम यात्रा अझ सवल हुने योग छ भने साउन, भदौतिर प्रेम जीवनमा केही समस्या सिर्जना हुन सक्छ । रिलेसनसिपमा रहेकाहरूको विवाह हुने योग पनि छ । यो वर्ष विवाह गर्ने हो भने त्यो दिगो हुने मात्र नभै जीवनभरका लागि प्रेममय हुन सक्ने देखिन्छ ।
प्रेम जीवनमा मिश्रित परिणाम देखिनेछ । शनि वक्र भएकाले यो राशिका स्वामी तथा उनीहरूका श्रीमती अथवा प्रेमिका बीच खटपट सिर्जना हुनसक्छ । त्यस्तो खटपटले भविष्यका लागि थप संकट सिर्जना गर्न सक्छ, तसर्थ पाइला–पाइलामा सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ । तपाईंको अहिलेको प्रेम सम्बन्ध आफ्नै परिवारका लागि अस्वीकार्य छ । यस्तो स्थितिमा सचेत भएर अघि बढ्नु तपाईंको हितमा देखिन्छ । विवाहितहरूको हकमा एक अर्कासँग रिसाउने–खुसाउने क्रम वर्षभरि नै चलिरहनेछ । सम्बन्धलाई दरिलो बनाउन कतै घुम्न जानुभयो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव जीवनभर रहनेछ । खासगरी नवविवाहित दम्पतीले मनोरञ्जक समय बिताउने कुरामा जोड दिनुहोला ।
केही धैर्यधारण गर्ने हो भने प्रेम जीवन एक खुड्किला माथि उक्लनेछ । जसले यही वर्ष प्रेम जीवन प्रारम्भ गरेका छन्, उनीहरूको सम्बन्ध निकै सकारात्मक ढंगले अघि बढ्नेछ । चैतको आधाआधीसम्मको समय आशाअनुकूल हुनेछ । यो अवधिमा कुनै नयाँ मानिसले मनमा स्थान जमाउन सक्छन् । वैशाखको आधाआधीतिर त्यही प्रेम सम्बन्धमा तनाव एवं विवाद देखा पर्न सक्छ तसर्थ यो समयमा आफूलाई संयमित रूपले प्रस्तुत गर्नुहोला । यतिबेला आफ्ना भावना र आवेशलाई नियन्त्रणमा राख्नु हितकर हुनेछ । वर्षको मध्यतिर प्रेम जीवनले निश्चित गोरेटो तय गरिसक्नेछ । कतिपयको यही वर्ष विवाह हुन सक्छ । विवाह भैसकेकाहरूको हकमा सानोतिनो विवादले नै तनाव सिर्जना गर्नेछ । त्यस्तो स्थितिमा मौन रहनुमै भलो हुन्छ ।
प्रेम जीवनमा नयाँ प्रारम्भ हुँदैछ । यो वर्ष कसैसँग प्रेम हुन सक्छ भने पहिलेदेखि नै प्रेममा भएकाहरूको विवाह हुन सक्छ । प्रेमी–प्रेमिकाहरू रोमान्टिक यात्रामा निस्कन सक्छन् । त्यस्तो यात्राका क्रममा एकले अर्काको सम्मान गर्न सके त्यसको सकारात्मक प्रभाव जीवनभर रहनेछ । होलि डे टुर, रोमान्स तथा मस्तीले यो वर्षभरि नै रोमाञ्चित तुल्याइरहनेछ । जीवनलाई थप प्रेममय बनाउन आफ्ना प्रेमी वा प्रेमिकाको विचार एवं दृष्टिकोणको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । प्रेम जीवनमा मस्त रहे पनि करियरप्रति पनि ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । करियरप्रति हेलचेक्र्याइँ गर्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव देखा पर्न सक्छ । करियरले नै तपाईंको प्रेमलाई निर्देशित गर्ने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउनु होला ।
यो वर्ष प्रेमको वर्षा नै हुनेछ । कुम्भ राशिको सम्पर्कमा रहने प्रेमि वा प्रेमिका धन र मन दुवैले सम्पन्न हुनेछन् । विवाहितहरूको यो वर्ष खुसीयालीपूर्ण रहनेछ । तैपनि प्रेम र भावनालाई आफ्नो कर्म क्षेत्रमा प्रवेश नगराउनु नै हितकर हुन्छ । आफ्नो प्रेम अनि दाम्पत्य जीवनमा अह्म र ईष्र्यालाई प्रवेश गर्न नदिनुहोला । आफ्ना प्रेमी वा प्रेमिका, श्रीमान् वा श्रीमतीमाथि अनावश्यक दवाव सिर्जना गर्दा त्यसले प्रतिकुल प्रभाव सिर्जना गर्नेछ । विशेष गरी प्रेम र यौनमा समर्पणको चाहना गर्दा एक अर्काको भावनालाई आफ्नै भावनाका रूपमा स्वीकार गर्न सके त्यसले प्रेम जीवनलाई थप रोमाञ्चक बनाउनेछ ।
वर्षका प्रारम्भिक दिनहरूमा प्रेमी–प्रेमिकाहरूले केही अप्ठ्यारा परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रेम सम्बन्धमा अचानक उथुलपुथुल आउन सक्छ । जो प्रेम सम्बन्धमा छैनन् उनीहरूका लागि पनि अहिलेको समय ठीक छैन । यस्तो बेला कसैलाई प्रेम प्रस्ताव नराखेकै राम्रो हुन्छ । प्रेमको सन्दर्भमा अहिलेको समय निकै संवेदनशील छ । कतिपय अवस्थामा वैवाहिक सम्बन्ध पारपाचुकेमा परिणत हुन सक्छ भने अविवाहितहरूको हकमा प्रेमी वा प्रेमिकाले अरू कसैसँग सम्बन्ध बढाउने वा विवाह गर्ने योग समेत देखिन्छ । समग्रमा भने हो भन्ने अहिलेको संवेदनशील समयमा प्रेमका मामिलामा हतार गर्दा उल्टो परिणाम हात लाग्न सक्छ ।
तेस्रो पटक पिता